तरकारी खेतीबाट मासिक डेढ लाख आम्दानी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
तरकारी खेतीबाट मासिक डेढ लाख आम्दानी
मंगलवार, चैत्र २२, २०७३ ०९:३५ मा प्रकाशित !
२२ चैत, रामपुर (पाल्पा)। रामपुर नगरपालिका–६ तालपोखराका नारायणप्रसाद भण्डारी तरकारीबाट यथेष्ट आम्दानी गर्छन । भण्डारी अहिले तरकारी बेचेर मासिक १ लाख ५० हजार बराबरको आम्दानी लिन सफल भएका छन । करिब २५ वर्षसम्म भारतमा काम गरेर फर्कएका भण्डारीले व्यावसायिक रुपमा तरकारीखेती गरेर जिल्लाकै नमुना कृषकका रुपमा चिनिन्छन ।
“जीवन जिउने आधार नै तरकारी खेती बनेको छ,” उनले भने– “यही व्यवसायबाट दाम र नाम मिलेको छ ।” जिल्लामै नमुना व्यावसायिक कृषकका रुपमा पहिचान बनाउन सकेकामा उनि खुसी छन ।
बाह्र वर्षअघि दुईवटा घिरौँलाको बोटबाट भण्डारीले व्यवसाय सुरु गरेका हुन । अहिले उनले सात रोपनी जग्गामा व्यवसाय विस्तार गरेका छन । मेहनत र जाँगर भयो भने यथेष्ट आम्दानी गर्न कुनै समस्या नहुने भण्डारीको भनाइ छ ।
बेमौसमी तरकारीले बजारमा उचित मूल्य पाएपछि त्यसतर्फ बढी ध्यान दिएको भण्डारी बताउछन । तरकारी व्यवसायबाट दुई छोरीको पढाइ खर्च, विवाह खर्चका लागि आफूलाई कुनै समस्या नपरेको उनको भनाइ छ । अहिले उनले काँक्रा, लौका, घिरौँला, फर्सी जातका तरकारी लगाएका छन । यतिबेला उनलाई काँक्रा बेच्न भ्याइनभ्याई छ ।
“बेमौसमी उत्पादन भएकाले बजारमा अत्यधिक मात्रामा काँक्रा बिक्री भइरहेको छ,” भण्डारीले भने। आफूमा सीप, जाँगर र मेहनत छ भने घरमै दैनिक दुई-तीन घन्टा काम गरेर पनि हजारौँ रुपैयाँ कमाउन सकिने उदाहरणीय पात्र बनेका छन कृषक भण्डारी ।
PREVIOUS POST Previous post: धौलागिरिमा ‘थ्रिजी’ सेवा विस्तार
NEXT POST Next post: नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा भित्तो काटिएका ठाउँमा सावधानी अपनाउनुपर्ने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, चैत्र २२, २०७३ ०९:३५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, चैत्र २२, २०७३ ०९:३५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, चैत्र २२, २०७३ ०९:३५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, चैत्र २२, २०७३ ०९:३५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, चैत्र २२, २०७३ ०९:३५